Verónica Roth: buugaag | Suugaanta Hadda
Encarni Arcoya | 26/09/2021 20:25 | La cusbooneysiiyay 26/09/2021 20:34 | Qorayaasha
Kuwa jecel buugaagta dhallinta yar iyo kuwa dystopian -ka, kuwaas oo ay ku soo bandhigaan mustaqbalka bulshooyinka, fasallada, iwm. hubso magaca Veronica Roth iyo buugaagteeda waa la wada og yahay iyaga.
Laakiin waa kuma Veronica Roth? Waa maxay buugta aad qortay? Haddii aadan garanayn, ama taa lidkeeda, haddii aad taqaano buugaagteeda ugu caansan, markaa waxaan kuu sheegi doonnaa dhammaan kuwa ay qortay iyo taariikh nololeedkeeda.
1 Waa kuma Veronica Roth?
2 Buugaagta Veronica Roth
2.1 Trilogy kala duwan
2.2 Sheekooyin gaagaaban oo la xiriira Kala -duwanaansho
2.3 Calaamadaha Dhimashada Duology
2.4 Dhammaadka iyo bilowga kale: sheekooyinka mustaqbalka
2.5 Duology Waxaa nala doortay
Waa kuma Veronica Roth?
Xigasho: blog kala duwan
Veronica Roth waxay caan ku noqotay saddex -geesoodka. Gaar ahaan, Kala duwan. Guushaas oo kale waxay ahayd in muddo yar gudaheed ay ku jaangooyeen filim, taasina waxay sii kordhisay xirfadda qoraakan Mareykanka ah ee dhashay 1988. Dabcan, waxaa dhashay aabe Jarmal ah, Edgar Roth, iyo hooyo Mareykan ah, Bárbara Rydz (oo isna asal ahaan ka soo jeeda Poland).
Su noloshu waxay dhaaftay sanadihii ugu horreeyay ee New York, laakiin markii waalidkiis kala tageen, hooyadiisna guursatay, wuxuu ku noolaa Illinois, Barrington.
Tan iyo markii ay yarayd waxay jeclayd inay wax qorto, iyo waliba inay wax akhrido. Qoyskeeda ayaa taageero weyn u ahaa tan iyo markii, markay ogaadeen inay hibo u leedahay qorista, waxay ku dhiirri -geliyeen inay toosiso dadaalkeeda ku aaddan hagaajinta iyo inay ku tababarto. Markaa wuxuu iska diiwaangeliyey Jaamacadda Northwwest halkaas oo uu ku bartay "Qorista Hal -abuurka."
Waxay shahaado ku leedahay xirfaddaas sidoo kale waxay ahayd kicinta qorista buuggeeda koowaad. Markii hore waxay ahayd uun qabyo qallafsan, oo ah meel uu ku qabsaday wixii uu ka bartay mihnadiisa isagoo u adeegsanaya ilaalin si uu uga nasto shaqooyinka kulliyadda. Magaca buuggaas? Kala duwan. Xaqiiqdii, Veronica Roth waxay ku andacootay in markii ugu horraysay ee ay "la xiriirto" sheekadaas ay ahayd socdaalkeedii Minnesota, kuleej.
Sida iska cad, wuu daabacay, guushaas oo kale ayaa ahayd in 2011 laga aqoonsaday 15 dal. Sidaa darteed, wuxuu caddeeyay inay tahay saddex -geesood. Sidoo kale 2011 waxay u ahayd sanad weyn qoraaga maadaama ay guursatay sawir qaade Nelson Fitzh.
Sannad ka dib wuxuu helay shirkad filim soo saarta, Summit Entertainment waxay ogaan doontaa buuggaas, oo iibi xuquuqda daabacaadda ee ku habboonaanta filimka. Isla sannadkaas, horeba 2012, wuxuu sii daayay qaybtii labaad, Insurgente.
Sannadkii 2013 ayay ahayd markii Leal. Xaqiiqdiina waad ogtahay in la -qabsiga buugaagta oo dhan la sameeyay, oo si guul leh loo goostay.
Sida abaalmarinnada, waxaa jira laba ku habboon. Dhinaca kale, sannadkii 2011kii, markii ay beesha Goodreads ku abaal -marisay Kitaab la jecel yahay. Sannad ka dib, sidoo kale Goodreads, waxay ku guuleysatay abaalmarinta Sheekooyinka Sayniska Qaangaarka ee Dadka Waaweyn ee ugu Fiican iyo Sheekada Fantasy.
Marka laga soo tago saddex -geesoodka kala -duwan, Verónica Roth waxay kaloo daabacday sheekooyin kale, kuwaas oo leh guulo yar maxaa yeelay lama maqlin. Si kastaba ha ahaatee, iyaga ayaan faallo ka bixin doonaa xagga hoose.
Buugaagta Veronica Roth
Xigasho: Magaalada buugaagta
Laga soo bilaabo Verónica Roth, buugaag runtii guulaystay oo ula jeeday kacaan, ma badna. Dhab ahaantii, kaliya saddexdii hore ee uu soo saaray, Kala -duwan, Mucaarad iyo Daacad, dhammaantoodna waxay ka soo jeedaan saddex -meelood oo kala duwan.
Si kastaba ha ahaatee, taasi micnaheedu ma aha in qoraagu joojiyay daabicitaankiisa, kana fog. Xirfadiisa suugaaneed waxay soo bilaabatay sanadkii 2011 welina waxay socotaa 2021 -ka. Sidaa darteed, waxaan kaaga sheegeynaa buugaagtiisa.
Trilogy kala duwan
Waxaan ku bilaabaynaa buugaagtii ugu horreysay ee Verónica Roth, kuwani waa Divergente (2011), Insurgente (2012) iyo Leal (2013). Dhammaantood waxay ka sheekeeyeen sheekada Beatrice, oo ah gabadh, halkii ay xirfado u lahaan lahayd hal koox oo ka tirsan bulshadeeda, dhammaantood lahayd. Taasina waxay ahayd khatar, xitaa waxay gaadhay in lagu xukumo dil haddii ay ogaadaan sirteeda. Dhinaceeda, waxaan haynaa Cuatro, oo ah wehelka jilaaga.
Saddex -geesoodku wuxuu ku dhuftay buugaagta dystopian. Dhab ahaantii, waxay soo baxday waqti isku mid ah Ciyaarihii Gaajada, taas oo ka dhigtay guusheedii mid ka sii weyn.
Sheekooyin gaagaaban oo la xiriira Kala -duwanaansho
Ka dib dhammaystirka saddex -geesoodka kala -duwan, Verónica Roth waxay sii waday inay siiso xoogaa "hadiyado" taageerayaasha, taas oo ka dhalatay sheekooyin gaagaaban oo ay soo saartay. Tusaale ahaan, Afar: ururinta taariikhda Kala -duwan, kaas oo uu ku soo ururiyey shan sheeko oo gaagaaban oo ka sheekeeyay qaybo ka mid ah nolosha Afar, ama aragtidiisa cutubyada qaarkood ee sheekada asalka ah. Dabcan, ma ahayn mid aad u dheer, maadaama ay si dhib yar u lahayd 257 bog (marka la barbar dhigo saddex -geesoodka, ku dhawaad ​​ma ahayn buug tan).
Cinwaanada shantan sheeko waa:
Afar Bilaash ah.
Calaamadaha Dhimashada Duology
Ka dib markii ay dhammaysay Kala -duwanaansho, Verónica Roth waxay isku dayday nasiibkeeda sheeko cusub, kiiskan duology, taas oo ah, laba buug: Calaamadaha Dhimashada, laga bilaabo 2017; iyo Meelaha la Kala Qeybiyey, sanadka 2018.
Sheekadu saamayn badan ma yeelan, maadaama aan la waafajin shineemada. Laakiin ma aysan ahayn buugaagtii ugu dambaysay ee qoraaga.
Dhammaadka iyo bilowga kale: sheekooyinka mustaqbalka
2019, daacad u ah xaqiiqda ah sii deynta buug sannad kasta, qoraagu wuxuu daabacay Dhammaadka iyo Bilowga Kale: Sheekooyinka Mustaqbalka. Waa buug gaar ah (kan ugu horreeya ee uu sameeyo) iyo intaas waxay ka koobnayd sheekooyin gaagaaban.
Duology Waxaa nala doortay
Ugu dambayntii, sannadka 2020, qoraagu wuxuu dib u bilaabay cilmiga duology. Sanadkii 2020 ayuu sii daayay Annaga ayaa naloo doortay waxaana la filayaa in buugga xiga uu soo bixi doono 2021, in kasta oo aan weli wax laga ogeyn.
Hearken waa sheeko gaaban oo Veronica Roth ay iska kaashadeen sheekooyinka gaagaaban ee Dystopian Shards & Dambas. Shirku wuxuu ku wareegsan yahay a gabadh maskaxda laga geliyo oo dhegeysan karta muusigga qofka dhimanaya dhexda rafcaanka.
Verónica Roth wax badan ma aysan daabicin, laakiin waxay leedahay boggeeda rasmiga ah oo aad ka heli doonto wararka ay sii deyneyso. Hadda, buuggiisii ​​ugu dambeeyay waa Anaga ayaa naloo doortay, laakiin ma diidno in ay jirto ogeysiis ku saabsan qaybta labaad ee isirkan. Ma jeceshahay qoraaga? Waa kuwee buugta aad ka akhrisatay iyada?
Wadada buuxda ee maqaalka: Suugaanta hadda jirta » Suugaanta » Qorayaasha » Veronica Roth: buugaag
Bandhigga Buugga Madrid. Taariikhda safarka